Liphoxile igidangoma likaSomnandi licwile kwezikaFaro emcimbini kaZimdollar | News24
Liphoxile igidangoma likaSomnandi licwile kwezikaFaro emcimbini kaZimdollar
Durban - Ucasuke wahlulake nokuzibamba uThokozani "Somnandi" Langa eqeda kunandisa emcimbini kaZimiphi Zimdolla Biyela ekhaya kubo ngeSonto.
Lo mculi kamaskandi ubedinwe ngomunye wabadansi bakhe obelokhu entanta esiteji kungaqondakali kahle ukuthi uhamba ngamuphi ushuni.
Yize abantu bakuthakasele ukuba khona kukaSomnandi futhi eshaya izingoma ezithandwa kakhulu, udilike esiteji wathi ukushaywa wumoya ngaphambi kokuqondisa izigwegwe omunye wamagidangoma akhe.
Kulo mcimbi bekunandisa abaculi abashaya isicathamiya, kanye nomaskandi kukhona nezintandokazi ezingoBahubhe, Qhoshangokwenzakwakhe, bekhona nonontanda kubukwa abongMzimba okhala imali kanye nabahleli bemicimbi kaMaskandi.
Bekuvalwe ngomuntu emnyango njengoba igceke lonke beligwele, kwazise phela ukuthi bekukhona nabaculi abasuka koColenso abashaya isicathamiya bejabulisa umphakathi.
OLUNYE UDABA:Kushone igidangoma likaShwi noMtekhala
Udadewabo kaZimiphi uLindiwe Biyela, ubonge ukufika kwamakhosi abekhona ukuzokweseka le ntokazi, wabuye wabonga nomakhelwane abaphume ngobuningi babo ukuzojabula nabo.
“Udadewethu uthe angimubongeke kakhulu kubo bonke abantu abathe bafika ukuzomeseka. Sisebenze ngokukhulu ukuzimisela ukuqinisekisa ukuthi abantu bayadla futhi bayakuthokozela ukuba nathi la ekhaya,” kusho uLindiwe.
UKhathide "Tshathugodo" Ngobe, naye obekhona uze wahamba engungwe ngabalandeli bakhe bathatha izithombe naye bengaqedi.